Taliyaha ciidanka oo uga mahadceliyey Safiirka Britain taageerada ciidanka xoogga. - Wargeyska Faafiye
Taliyaha ciidanka oo uga mahadceliyey Safiirka Britain taageerada ciidanka xoogga.
Taliyaha Ciidamadda Xoogga Dalka Soomaaliyeed Sareyo Gaas Maxamed Aaden Axmed, ayaa kulan kula yeeshan xarunta Safaaradda Great Britain ee magaalada Muqdisho Safiirka u fadhiya Soomaaliya Danjire Harriett Mathews. Waxaana ay ka wada hadleen taageerada ay Boqortooyada Ingiriisku siiso ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed. Iyadoo ay isku afgarteen in la kordhiyo tirada iyo taakuleynta ay siiyaan ciidanka xoogga.
Danjire Harriett Mathews ayaa balanqaaday inay bixinayaan mushaaraadka ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qeybta 60aad, iyadoo sidoo kale sheegtay in ay ka qeyb qaadanayaan dib u dhiska xeryaha Ciidamada si loo xoojiyo tayada iyo tababarka ciidanka.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa tan iyo intii la magacaabay wadey sidii dib u dhis xooggan loogu sameyn lahaa ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo sidii loo heli lahaa xuquuqda ciidamada Qalabka sida.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsAl-Shabaab Link to Boston Marathon Bombings?Political infighting threatens Somalia's government.Officials: Al-Qaida bomber was CIA informant.Wafdi K/African ah oo yimid MuqdishoQarax ka dhacay guriga M/weynaha agtiisa: Gaalkacyo